Anguilla na-emelite usoro nlekọta ahụike ọha na eze maka ndị ọbịa
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Ozi Njem Anguilla » Anguilla na-emelite usoro nlekọta ahụike ọha na eze maka ndị ọbịa
Applicationgwọ akwụkwọ maka itinye akwụkwọ na ihe achọrọ iji nọrọ ebe a ga-ebelata maka ndị ana-enye ọgwụ mgbochi.
Anguilla na-agbanwe agwaetiti ahụ n'enweghị nsogbu ọ bụla nke ga-eme ka akụ na ụba nweghachi.
Nkesa na ochichi nke mmemme ogwu na Anguilla nwere nnukwu ihe metụtara njem nleta na mpaghara.
Protofọdụ usoro ọgwụgwọ ọhụrụ ga-amalite ozugbo ozugbo ndị ọzọ ga-ewere ọnọdụ n'usoro.
Ndị isi ochichi nke Anguilla akwadola atụmatụ COVID-19 Exit Strategy, gụnyere usoro nke usoro ntinye ederede gbanwere, ụfọdụ n'ime ha ga-arụ ọrụ ozugbo, ebe ndị ọzọ ga-ebute ụzọ na ọnwa ndị na-abịanụ. Ezubere atụmatụ a iji gbanwee agwaetiti ahụ n'enweghị nsogbu site na ogologo oge mkpụmkpụ akụ na ụba iji wepụta ọrụ azụmaahịa achọrọ iji weghachi akụ na ụba.
“Anyị matara na nkesa na nchịkwa nke usoro ọgwụ mgbochi na ahịa anyị na isi iyi yana Anguilla nwere nnukwu ihe metụtara ụlọ ọrụ ndị njem anyị,” ka Hon. Mịnịsta nke njem, Maazị Haydn Hughes. “Ka ọtụtụ mmadụ na-agbakwa ọgwụ mgbochi ọrịa, ọrịa ọhụrụ amalitekwa larịị, anyị kwenyere na ọ dị mma iletaghachi na imelite usoro iwu ntinye anyị n'oge a. Dị ka ọ dị na mbụ, ahụike na nchedo nke ndị ọbịa anyị na ndị bi na anyị kachasị mkpa, anyị na-amalitekwa usoro dị iche iche iji mepee agwaetiti anyị kpamkpam.
Russia machibidoro ụgbọ elu ndị njem na Turkey, kwụsịtụrụ ụgbọ elu Tanzania
Obodo 2021 kacha mma obodo US maka Ugbo Ugbo Aha